ကမ္ဘာ့သစ်များနေ့ အခမ်းအနားကို မန္တလေးမြို့တွင် သုံးရက်တိုင်တိုင် ကျင်းပ - Yangon Media Group
International Wood Culture Society (IWCS) နှင့် World Wood Day Foundation (WWDF) တို့ကကြီးမှူး၍ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး သစ်တော ထွက်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း ၏ စီစဉ်မှုဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံကအိမ် ရှင်အဖြစ် ပထမဦးဆုံးလက်ခံကျင်း ပသည့် World Wood Day Foundation (WWDF) အခမ်းအနားဖွင့်ပွဲကို ဧပြီ ၆ ရက် နံနက် ၉ နာရီက မန္တလေးမြို့တော်ခန်းမ (၁) ရှေ့၌ ကျင်းပခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး သစ် တောထွက်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းရှင်များ အသင်းမှ ဥက္ကဋ္ဌဦးရဲမင်းသူက ”မြန်မာနိုင်ငံမှာလာလုပ်တာက ခြောက် နှစ်မြောက်အတွက် အခမ်းအနား ဖြစ်ပြီး သစ်ဟာဂေဟစနစ်အရအကျိုးပြုတဲ့ renewable biomaterial ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကို မီး မောင်းထိုးပြဖို့၊ သစ်ရဲ့အရေးပါမှု၊ တန်းဖိုးနဲ့၊ ဗဟုသုတနဲ့ ပညာရပ် တွေကို မျှဝေနိုင်ဖို့နဲ့ လူသားတို့ရဲ့ ဘဝတစ်လျှောက်မှာ ဖြုန်းတီးမှုမရှိ ဘဲ တာဝန်သိသိနဲ့ အသုံးပြုတတ် ကြစေဖို့အတွက် ရည်ရွယ်ကျင်းပ ကြတာပါ။ ဒေသတွင်းက ပန်းပု ပညာရှင်အယောက် ၃ဝ ကိုဖိတ် ခေါ်ပြီး ပန်းပုလက်ရာပြိုင်ပွဲတစ် ခု ပြုလုပ်ပေးထားပါတယ်။ ထုလုပ် ဖို့အတွက် လိုအပ်တဲ့သစ်သားကုန် ကြမ်းတွေကို IWCS ကနေ ထောက် ပံ့ပေးမယ့်အပြင် ပညာရှင်တွေကို နေ့တွက်လုပ်အားခကိုပါ ချီးမြှင့် ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်” ဟု ဒီမိုကရေ စီတူဒေးသို့ ဧပြီ ၆ ရက်တွင် ပြော ကြားသည်။
အဆိုပါ ပန်းပုပြိုင်ပွဲတွင် ပထမဆုရရှိသောပညာရှင်သည် မြန်မာနိုင်ငံကိုယ်စားပြုအဖြစ် ၂ဝ၁၉ ခုနှစ်တွင် ဥရောပတွင်ကျင်းပမည့် World Wood Day (2019) ကို တက်ရောက်ခွင့်ရရှိမည်ဖြစ်ရာ ကုန်ကျစရိတ်များကို အသင်းမှပံ့ပိုး ပေးမည်ဖြစ်ပြီး ဒုတိယဆုနှင့် တတိယဆုရရှိသူ ပညာရှင်နှစ်ဦးကိုလည်းနိုင်ငံခြားလေ့လာရေးခရီးစဉ်များအတွက် ဖိတ်ခေါ်သွားမည်ဖြစ် ကြောင်း၊ သစ်နှင့်ပတ်သက်သည့် ပန်းပုပညာကို သင်ယူလိုသောလူငယ်များအတွက် လက်တွေ့သင်ပြ ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ဖွင့်ပွဲအခမ်း အနားတွင် စာတမ်းများဖတ်ကြား ခြင်းနှင့်အတူ သစ်သားဆိုင်ရာ လက်မှုပညာရပ်များ လက်တွေ့ပြသခြင်း၊ ကလေးငယ်များအတွက် ပညာပေး အစီအစဉ်များ၊ သစ်ပင်စိုက်ပျိုး ခြင်း၊ အာဖရိကအဖွဲ့နှင့် မက္ကဆီကို အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့တို့က သစ်သားဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော တူရိယာပစ္စည်းများ ဖြင့် ဖျော်ဖြေတင်ဆက်ခြင်းတို့ဖြင့် ဧပြီ ၈ ရက်အထိ ကျင်းပမည်ဖြစ်ရာ စိတ်ဝင်စားသူမည်သူမဆို လာ ရောက်လေ့လာနိုင်ကြောင်း သိရသည်။
တောင်သမန်အင်းရှိ ဒေါက်တာသန်းထွန်း အုတ်ဂူနေရာတွင် (၉၅) နှစ်မြောက်မွေးနေ့ အထိမ်းအမှတ် စာတမ်း?
ဆေးခြောက် ဧက ၂ဝ စိုက်ပျိုးမှုဖြင့် ဖမ်းဆီးထားသည့် အမေရိကန်နိုင်ငံသား တစ်ဦးနှင့် စိုက်ခင်း?
မွန် ညီညွတ်ရေးပါတီအဖြစ် မွန်နှစ်ပါတီ ပူးပေါင်းရေးကို ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်မှ
တရုတ်နှင့် အီးယူအဖွဲ့တို့သည် ငွေကြေးကို လက်ဝါးကြီးအုပ် ချယ်လှယ်နေသည်ဟု ထရန့်က ပြောကြား